Warbaahinta CNN oo Raali –Galin ka baxisay war ay Kenya ka baahiyeen – Radio Daljir
Warbaahinta CNN oo Raali –Galin ka baxisay war ay Kenya ka baahiyeen
Agoosto 15, 2015 12:32 b 0
Sabti, Ogoosto 15, 2015 (Daljir) —Telefishinka CNN ee xaruntiisu ku taallo Mareykanka ayaa raali-gelin ka bixiyay war uu sii daayay oo ahaa in Kenya ay tahay meel argagaxisadu degen tahay, xilli uu bishii July Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu booqasho ugu socday Nairobi.
Agaasimaha Waaxda Wararka Caalamka ee CNN-ka, Tony Maddox ayaa arrintan ka raalli-geliyay Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, isagoo qirtay inay Arrin Xanuun badan ay tahay in Kenya lagu tilmaamo hoyga argagaxisada, taasina aysan munayn.
“Ma ahayn in Muuqaalka Kenya lagu Tilmaamo mid xun; waa arrin xun oo aanu si khalad ah u tabinnay,” ayuu Maddox ku yiri war-saxaafadeed Nairobi ka soo baxay kaddib markii uu Khamiistii shalay ahayd la kulmay Kenyatta.
Isagoo sii hadlaya ayuu Tony Maddox intaas ku daray. “Waxaa jirta in Caalamka oo dhan uu dagaal kula jiro Argagaxisada. Waana ognahay in Kenya ay ka mid tahay Wadamadaas, balse Kenya ma ahan meel khatar ah.”
“Waxaan qirayaa in warkaas uu dareen xoog leh iyo caro badan abuuray, inagoo si dhaqso ah uga saarnay Telefishinka warkaas markii aan ogaannay,” ayuu yiri mar kale Maddox oo sidoo kale madax ka ah Xafiiska Tifaftiraha Wararka CNN-ka ee Siyaasadda Caalamka.
Telefishinka CNN-ka ayaa Baahiyay 23-kii July in Madaxweyne Barack Obama uu ku sii-jeedo Dalkii uu Aabbihii kasoo jeedo ee Kenya, iyagoo ku Tilmaamay inay tahay meel ay argagaxisadu ku xooggan tahay. Warkaas oo ay Jawaab adag ka bixiyeen shacabka Kenya ee Isticmaalaha Bogagga ay Bulshadu ku Xiriiraan.
Sidoo kale, Mas’uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in cinwaanka Warbixinta CCN-ku ay baahiyeen ee ay Kenya ku tilmaameen meel ay degen tahay Argagaxisada oo laga yaabo in lagu dilo Madaxweynaha Mareykanka ay ahayd mid muuqaalka guud ee Dalka Kenya lagu xumeynayo, iyagoo sheegay in dalkooda uu yahay mid uu ammaan ka jiro.
Warbixinta uu CNN-k baahiyay bishii hore ayaa lagu soo beegay xilli ay Sanadka nagu soo fool leh ka dhici doonto doorashada guud Sannadka soo socda; taasoo la filayo inuu loolan adag ku dhexmaro Isbahaysiga Talada Kenya haya ee Jubilee iyo Is-bahaysiga Mucaaradka ah ee CORD.
DHAGAYSO:Wasiir Xiddig oo ka warbixiyay Ujeedka uu u yimid Kismaayo
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Sabti_15